I-China 55 HRC Carbide 4 Flute Roughing End Mill abavelisi kunye nabathengisi | Mingtaishun
Isaphulelo esiQhelekileyo seLide sokuFikelela kweeMill-55 HR ...
Ukusetyenziswa kwamasuntswana amatsha aphezulu acocekileyo ngezinto zentsimbi ye-tungsten, kunye nokumelana nokunxiba okuphezulu kunye namandla, izicelo zokusika ezikhawulezayo ezikhethekileyo zokugaya ukusika konke.
Ikhaba ligutyungelwe ngepeyinti, isantya esirhabaxa sezinto ezishushu sinokulungiswa ukucutha inani lotshintsho lwezixhobo.
Ubhedu, intsimbi engenasici, intsimbi yesinyithi, isixhobo sesinyithi, isicinyiwe kunye nentsimbi enobushushu, intsimbi yekhabhoni, intsimbi ebunjiweyo, ubushushu buphathwe ngentsimbi
Isixhobo esisebenza ngokukuko
Yonke imifanekiso ebonisiweyo yenzelwe umzekeliso kuphela Imveliso eyiyo inokwahluka ngenxa yokuphuculwa kwemveliso
Ukuza kuthi ga ngoku iimveliso zethu zithunyelwe kwimpuma Yurophu, kuMbindi Mpuma, Mpuma, Afrika nase Mzantsi Melika njl. Sinee-13years zokuthengisa kunye nokuthenga kwiindawo ze-Isuzu ekhaya nakumazwe aphesheya kunye nobunini bezixhobo ze-Isuzu zangoku ezijonga iinkqubo. Sizukisa inqununu yethu engundoqo yokunyaniseka kwishishini, eyona nto iphambili kwinkonzo kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukubonelela abathengi bethu ngemveliso ekumgangatho ophezulu kunye nenkonzo ebalaseleyo.
Inkampani yethu sele inefektri ephezulu kunye namaqela ezobuchwephesha eTshayina, abonelela ngeyona mveliso intle, ubuchule kunye neenkonzo kubathengi behlabathi. Ukunyaniseka ngumgaqo wethu, ukusebenza ngobuchule ngumsebenzi wethu, inkonzo yinjongo yethu, kunye nokwaneliseka kwabathengi ikamva lethu!
Sinabathengi abavela kumazwe angaphezu kwama-20 kwaye igama lethu liye laqatshelwa ngabathengi bethu abahloniphekileyo. Ukuphuculwa okungapheliyo kunye nokuzabalazela ukusilela kwi-0% yimigaqo-nkqubo yethu emibini esemgangathweni. Ukuba ufuna nantoni na, ungathandabuzi ukunxibelelana nathi.
Egqithileyo I-55 ye-HRC Carbide 3 Iifreyithi eziMiselweyo zokuGcina iMileth yeAluminiyam
Okulandelayo: I-55 yeHRC khabhayithi 4 Ubungakanani obuqhelekileyo beFlit Corner Radius End Mills